खोलाले सडक कटान गर्दा पासाङल्हामु राजमार्ग बन्द
पेट्रोल ६२ रुपैयाँमा किनेर ११० मा बेच्दा पनि निगमलाई घाटा !
खेल क्षेत्रको विकास जरुरी छ – गृहमन्त्री थापा
प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा प्रदेश नं २, सबै भन्दा बढी विकास हुने प्रतिबद्धता
डोल्पा, ४ साउन । डोल्पामा एकजना नेपाली सेनाका जवान आफैँले चलाएको गोली लागेर शख्त घाइते भएका छन् ।
बिहीबार ड्यूटीमा रहेका २२ वर्षीय ध्रुव चन्दले असावधानीवश आफैँले गोली चलाउँदा घाइते भएका हुन् । शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ सुलिगाडमा रहेको ईश्वरी बक्स गुल्ममा कार्यरत सेनाका जवानले आफैँले गोली चलाई घाइते भएका थिए ।
आफैँले हानेको गोलीले उनको चिउँडो, मुख, ओठ र नाक पूरै च्यातिएको जिल्ला अस्पताल डोल्पाका मेडिकल सर्जन डा अनुप मंगल समालले जानकारी दिए ।
डा अनुपले एक्सिडेण्टल बुलेट केस (बन्दूकबाट भएको दूर्घटना) भएकाले बिरामीले बोल्न नसक्ने र उनको उपचार डोल्पामा हुन नसक्ने भएपछि काठमाडौँ लैजान सल्लाह दिएको बताए । उनले भने,“अवस्था गम्भीर छ, तर काठमाडौँमा उपचार हुन्छ, बिरामीको होस् गुमेको भने छैन ।”
ड्यूटीमा रहेका जवानले एकैपटक गोली चलाएर हतियार पड्केको आवाज आएपछि मात्र अरुले थाहा पाएको सेनाले जानकारी दिएको छ । सेनाका अनुसार तत्काल जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि लगेको र थप उपचारका लागि प्रदेश केन्द्रबाट हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरी सुर्खेत हुँदै काठमाडौँ लगिएको छ ।
घटना कसरी घट्यो भन्नेबारे थप अनुसन्धान भइरहेकाले घटनाका बारेमा तथ्य कुरा भन्न नसकिने ईश्वरीबक्स गुल्मका गुल्मपति जेनिथ जवेगुले जानकारी दिए ।
ड्यूटीमा रहेका २२ वर्षीय ध्रुवको स्थायी घर कैलालीको धनगढीमा भएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ । घाइते जवानको अवस्था गम्भीर भए पनि होस्मा नै रहेकाले उपचार राम्रैसँग हुने चिकित्सकले जानकारी दिए । घाइते सैनिक जवान ध्रुव लेखेर नै आफ्ना भनाइ राख्छन् ।
चन्द्रागिरिमा सामाजिक सेवाको सिफारिश ...
सामुदायिक विद्यायलमा सिभिल इञ्जिनियरिङ ...
शिक्षक मृत अवस्थामा फेला
कनकाईमा नगरस्तरीय फुटबल
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ शनिबार पनि ...
1 एशियाली खेलकूदमा नेपालको आज नौ खेलमा प्रतिष्पर्धा
2 अन्नानको निधनप्रति विश्वभरबाट शोक व्यक्त
3 सेक्सको उत्तम समय
4 कहिले बस्ला संवैधानिक इजलास ?
5 युरोपमा हुने जडीबुटी कार्यक्रममा व्यवसायी जानु पर्ने, कर्मचारी जाँदै
6 प्रचार हुन नसक्ता ओझेलमा परेको ताप्लेजुङको तोक्पेगोला
7 चिनियाँ टोलीले अवलोकन गर्यो ताप्लेजुङको अलैँचीको बगान